Home » Lahatsoratra farany farany » Editorial » Fitantanana hotely, COVID-19, governemanta / politika ary ianao
Editorial • Vaovao • Safety • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Covid-19 nanjary nofy ratsy nofy ratsy indrindra na kintantsika mamirapiratra indrindra, miankina amin'ny ampahan'ny toekarena antsoinao hoe an-trano izany. Raha miankina amin'ny fahombiazana ao amin'ny indostrian'ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany, mety diso fanantenana ianao.
Nanomboka tamin'ny Janoary 2020, ity virus ity dia nanova ny ampahany amin'ny toekarena izay tsy azo sitranina tanteraka hatramin'ny 2022 na 2023. Ny tompona, ny mpandraharaha, ny mpitantana ary ny mpiasa dia nijery fanafoanana ny dia lavitra, fampiatoana ny sidina nasionaly sy iraisam-pirenena, fanemorana na fanafoanana ny lehibe sy ny kely hetsika- tsy misy fahefana hampiatoana azy. Mandositra tanàna ny olona ary misoroka ny fandehanana any amin'ireny toerana itodiana ireny na dia tsy misy ifandraisany amin'ny hakitroky ny tanàna aza ny olana ara-pahasalamana fa kosa ny tsy fitoviana eo amin'ny rafitra sy ny kalitaon'ny fananganana tanàna.
Ny fizarana indostrialy rehetra dia efa niaina fitomboana sy fahombiazana ara-bola hatramin'ny faran'ny taona 2019, ary tratry ny virus miparitaka be tsy manana fiaviana azo antoka izay niely vetivety tamin'ny rivotra. Ireo indostrian'ny fizahantany dia tsy vonona hiatrika ny toe-javatra misy ny voina, eny fa na dia any amin'ireo faritra iharan-doza aza. Ny fikarohana dia manondro fa aorian'ny fikorontanana misy eo amin'ny lafiny fahasalamana sy ny toetr'andro, dia tsy te handeha any amin'ireny toerana ireny ny mpizahatany, ary manampy trotraka ny raharaham-pirenena, ny governemanta dia mametraka sakana amin'ireo mpandeha mankany amin'ireo faritra ireo.
Ny vinavina ara-toekarena dia manondro fa ny indostrian'ny fizahantany marobe dia tsy ho sitrana ao anatin'ny fotoana fohy na amin'ny fotoana fohy satria voafatotra amin'ny fidiram-bola ny fangatahana, ary ny fihenan'ny vokatra dia miteraka fihenan-tsasatra mitovy na lalina kokoa amin'ny fihinanana vokatra / serivisy fizahantany. Ho fanampin'izany, mety hisy ny fiovan'ny tinady fitodiana any amin'ny traikefa iraisam-pirenena mankany amin'ny toerana misy anao.
Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny dia marefo indrindra amin'ny krizy satria ny zava-bita dia miankina amin'ny fangatahana avy amin'ny mpizahatany. Miaraka amin'ny fanidiana ny seranam-piaramanidina, ny fanafoanana ny sidina fiaramanidina, ary ny quarantine, dia kely na tsy nisy ny fangatahana efitrano fandraisam-bahiny ka nahatonga ny fihenan'ny isan'ny olona sy ny vola miditra, ny fihenan'ny asa ary ny fahasimban'ny fananana tsy voakarakara.
Ireo fepetra fanovana ireo dia nahatonga ny famerenana ny politikan'ny famandrihana / fanafoanana, mivoatra hatramin'ny fameperana be ka hatramin'ny malefaka. Ho fanampin'izany, ny varavarankely famandrihana dia nanjary fohy kokoa sy fohy kokoa tamin'ny sehatra maro amin'ny tsena, miaraka amin'ireo mpandeha fialan-tsasatra sy raharaham-barotra mitady elastika amin'ny taha, sarany ary politika fanafoanana.
Governemanta: Hery miabo?
Ny hetsika ataon'ny governemanta sy ny mpitondra sehatra tsy miankina dia afaka manampy na manakana ny indostria; indrisy, na ny olom-boafidy na ny mpitantana dia tsy mifanaraka amin'ny nuansa eo amin'ny sehatry ny indostria ka ny hetsika sy hetsika ataon'izy ireo dia mety ho faneriterena fa tsy hanampy sy hanohana. Zava-dehibe fa, aorian'ny krizy, ny ambaratongam-panjakana rehetra dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany sy ny varotra, fa ny tena zava-dehibe, ny fifantohana amin'ny politika ara-bola sy ara-bola, ahafahan'ny fikambanana fizahan-tany mampitombo ny vola mitanatana sy maharitra.
Ny hotely tsirairay dia hiaina ny vokadratsin'ny COVID-19 amin'ny fomba tokana ananany. Ny fomba fandraisan'ny tompona / ekipa mpitantana ny fanamby dia miankina amin'ny fiantraikan'ny hotely. Ny fiatraikany dia hojerena avy amin'ny prisma ny habeny, ny sokajy, ny franchise na ny hazakazaka fianakaviana.
Ireo trano fandraisam-bahiny nifantoka tamin'ny fananana an-tsena ambony miaraka amin'ny marika dia mety handamina ireo fanamby amin'ny fomba mahomby sy amin'ny zava-misy satria ireo mpitantana matihanina, manana andraikitra lehibe amin'ny ezaka fanarenana, no handray an-tanana. Ireto mpitantana ireto, tompon'andraikitra amin'ny paikady, fomba vaovao ary torolàlana ho an'ny mpiasa ary ny serasera dia afaka manentana ny fomba famoronana amin'ny asa sy mandrisika ny fanavaozana. Amin'ny tranga vitsivitsy, ny krizy dia mety hampiharihary teboka iray ho an'ny trano fandraisam-bahiny, mahita tsena vaovao sy / na tombontsoa mifaninana miavaka hafa.
Tsy mora ny asa
Ny mpitantana ny hotely dia takiana amin'ny fifandraisana sy fiaraha-miasa amin'ireo mpiaramiasa anatiny sy ivelany manan-danja, manangana na mampihena ny vidiny ankapobeny, ao anatin'izany ny fanafoanana na ny fifampiraharahana amin'ny mpivarotra sy ny mpamatsy izay mifantoka manokana amin'ireo maso ivoho sy mpiasan'ny fizahan-tany. Izy ireo koa dia hampanaovina andraikitra amin'ny fampivoarana ny fidiram-bola vaovao sy ny famantarana ny fizarana tsena vaovao. Ny mpitantana ambony dia tsy maintsy:
Atsangano indray ny departemanta sy ny fandaharam-potoana rehetra mifototra amin'ny asa vaovao mifandraika amin'ny krizy,
Tohano ny mpiasa hiatrika ny fanambin'ny zava-misy vaovao,
Mamolavola sy mampihatra politika fanafoanana vaovao sy malefaka kokoa, sady mampifanaraka ny fomba fanao, ny fenitra ary ny fotodrafitrasa hiasa amin'ity fomba vaovao ity, ary
Avereno jerena ny fanangonana angon-drakitra sy famatsiam-bola, famakafakana ary forecasting hiatrehana ny vokatry ny krizy.
Azo inoana fa mila fomba vaovao ny mpiasa, fandaharam-pianarana mikasika ny fahatsiarovan-tena momba ny fahasalamana sy fiarovana ary ny fitaovana sy fomba fidiovana vaovao izay hampiasaina aorian'ny COVID-19.
Marka Target vaovao
Any amin'ny firenena sasany dia namorona tsena vaovao tsy maharitra vetivety ny viriosy hametrahana trano hatreha-namana ary eny fa na ny fananan'ny Airbnb aza dia niditra an-tsokosoko mba hametrahana efitrano fitokana-monina ho an'ireo mponina izay niverina tany amin'ny fireneny na mila misaraka amin'ny fianakaviany satria ny aretina.
Amin'ny tsena hafa, mpandraharaha hotely sy mpamatsy teknolojia hotely dia manangana sehatra ecommerce na mampifandray trano mivantana, manolotra serivisy ara-pahasalamana (ie, fandriana na serivisy fanasan-damba ho an'ny mpitsabo sy hopitaly). Na dia maimaimpoana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana aza ny efitrano, maro ny governemanta no mandoa ny trano fandraisam-bahiny mba hipetrahana, manampy ny tompona / mpitantana handoa ny sarany voafetra.
Any Etazonia, Hospitalityhelps (Cloudbeds) sy Hospitality for Hope (American Hotel and Lodging Association), no mitarika ny ezaka. Intercontinental Hotel Group (UK), Accor (France) ary Apalleo, mpamatsy teknolojia any Alemana (Hotelheroes), dia manome fanampiana. Any Polonina, ny orinasa GK Polish Holding Company dia manohana ireo mpiasan'ny fitsaboana sy ny mpiasan'ny hopitaly amin'ny alàlan'ny fanolorana sakafo sy trano fialofana amin'ny alàlan'ny Hotels for Medics Foundation.
Fanamarinana marina. Tsy fisainana majika
Ireo mpitarika indostria dia mirona amin'ny resaka pragmatika ary i Michelle Russo, mpanorina / CEP an'ny HotelAVE dia nandefa lahatsoratra tao amin'ny tranonkalany fa, “… Sarotra ny miantehitra amin'ny angona ara-tantara na ny fitotongan'ny lasa mba hamakivakiana ny fanapahan-kevitra ilaina anio.”
Chris Hague, ny Chief Operating Officer ao amin'ny HotelAVE, dia nanaiky fa, "ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia mbola manana ny ankamaroan'ny mpiasa amin'ny volom-borona ary maro no efa nandalo fitsaharana maharitra," ary nanamarika fa tsy ho haingana ny fanarenana indostrialy. Hague dia nahita fa, "Ny trano fandraisam-bahiny mihidy dia manohy manombatombana amin'ny fanokafana ny vidiny sy ny masonkarena miaraka amin'ny fifantohana amin'ny 'fahaverezana kely kokoa', fa ny" trano fandraisam-bahiny misokatra kosa dia mifantoka amin'ny fisamborana ny fangatahana voafetra misy ankehitriny sy ny fanalefahana ny fandaniana azo fehezina, sady manome antoka ny fiarovana ny mpiasa sy ny vahiny amboalohany. Araka ny lazain'i Hague, "Tompona maro no manombatombana loharanom-pahalalana hafa ahafahana miatrika ity tafio-drivotra ity raha ny sasany kosa manararaotra ny tontolo iainana ankehitriny amin'ny fanavaozana tsy misy famindram-po ataon'ny mpanatanteraka sy ny ezaka fametrahana indray."
Ny lasa dia atsofoka tsimoramora ao anaty boky tantara ary izao no fotoana handaminana ny ho avy. Nanoro hevitra i Hague fa ny mpitantana, “hamolavola fomba famoronana hitrandrahana ny habaka ivelany sy ny toerana anaovany ny tranony” ary manome soso-kevitra ny amin'ny hotely, “hifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fanadiovana vaovao sy ny fanandramana tsy misy tohiny…”
Tena be fanantenana i Hague ary mahita ny fahaizan'ny indostria, ny fahaiza-mamorona ary ny etika miasa mafy - ilaina daholo izany raha tiana haverina ny orinasa. Azony antoka fa, "hitohy ny fivoaran'ny teknolojia ny traikefan'ny vahiny… ary ny asan'ny asa sasany dia mety soloina robot. Na eo aza izany dia manohy mahita fampidirana asa sy fanovana asa vaovao sy mamorona eo amin'ny habaky ny hôtely izahay satria mitady toerana honina traikefa kokoa ny vahiny.
Matt Fairhurst, ny CEO sy Cofounder of Skedulo, dia naminavina ihany koa ny fanarenana miadana satria ny, "ny krizy ankehitriny dia niteraka fisalasalana sy fisalasalana ho an'ny mpanjifa, indrindra ny momba ny hevitra momba ny fitsangatsanganana sy fandraisana olona. Ny tompon'andraikitra amin'ny hotely izao dia notendrena hamerina ny fahatokisan'ny mpanjifa, ny fanarenana ny asa ary ny fahazoana vola very. ” Fairhurst dia nanoro hevitra fa, "Mba hamerenana soa aman-tsara ny mpitsidika dia mila mampiasa vola amin'ny fomba mahery vaika ny tompon'andraikitra amin'ny hotely ary mampihemotra ny teknolojia hampihena ny fahasarotana, hanatsara ny asan'ny mpiasa eo aloha ary hanatsara ny traikefan'ny mpanjifa."
Hitan'i Fairhurst ihany koa fa, "Miaraka amin'ny lalànan'ny governemanta tsy mitsaha-mitombo sy ny politikan'ny hotely, matetika dia manjary tototry ny sahirana na misavoritaka ny mpiasa eo alohany, ka miteraka tsy fahatanterahana ny fomba fitantanana (toy ny tsy fanaovana sarontava na fanadiovana tsy dia mifanaraka amin'ny faritra avo lenta). Mila mahatoky ireo vahiny fa hatao laharam-pahamehana ny fiarovana azy ireo ary mifanaraka amin'ny protokolola sy ny fifandraisana ny mpiasa. ” Fairhurst dia nanamarika fa ny tsy fitoviana amin'ny serivisy sy ny fomba fandraisam-bahiny dia mety hiafara amin'ny famerenana ratsy na vahiny tsy miverina.
Fairhurst dia namporisika ny fampiasana ny haitao tsy misy fifandraisana ho fomba iray ahazoana ny fitokisana sy fahatokisan-tena ary sady miaro ny mpiasa ary manolo-kevitra, "Fanamarinana - amin'ny alàlan'ny kaody QR, manome karatra fanalahidy azo alaina sy safidy fandoavam-bola tsy azo ifandraisana," izay mampihena ny "fifandraisan'ny sehatra avo lenta…"
Ny halavirana ara-tsosialy dia zava-dehibe hodinihina manerana ny trano fandraisam-bahiny ary nanoro hevitra i Fairhurst fa hikaroka teknolojia manara-maso sy mametra ny fahafaha-manana efitrano sy faritra hafa be olona be olona toa azy ny bar, trano fisakafoanana, gym, pisinina ary toerana fialamboly hafa.
Ny fikojakojana ny vidiny dia mety ho laharam-pahamehana amin'ny COVID-19 ary i Fairhurst dia manoro hevitra ny amin'ny fampiasana ny "vahaolana momba ny fifandraisana mandeha ho azy" hanampiana amin'ny fampahatsiahivana ireo vahiny amin'ny fitsidihana ho avy sy ny fangatahana fanamafisana ny famandrihana ho an'ny daty be fangatahana, "ary mamporisika ireo lisitra fiandrasana mba hahafahan'ny mpitantana efitrano nofoanana indray.
Ny fikambanan'i Fairhurst, Skedulo, dia mizaha ny fampiharana ny haitao fandaminana fotoana avo lenta izay mandamina ho azy ny olona manao fanendrena ary mampifanaraka ny haitao amin'ny indostrian'ny hotely. Ny teknolojia dia azo ampiasaina hanomanana ny ora hahatongavan'ireo vahiny ary hametra ny isan'ny olona ao anaty ascenseur. Izy io koa dia afaka manome fomba fijery amin'ny mpitantana hotely momba ny fangatahana amin'ny ora andavan'andro na andavan'andro, mamela ny fanapahan-kevitra hendry horaisina momba ny fotoana fanadiovana sy ny filan'ny mpiasa.
Jay Stein, tale jeneralin'ny Dream Hotels, dia nanome toromarika ireo mpitantana ny fananany mba “hameno ny torolàlana momba ny fijanonan'ny trano fandraisam-bahiny amerikanina sy ny trano fandraisam-bahiny”, ary ny fanentanana amin'ny marketing ho an'ny hotely dia manasongadina ny fahadiovana sy ny fanalavirana ara-tsosialy miaraka amin'ny tanjona hizarana ny hafatra momba ny fahasalamana sy fiarovana an'i Dream.
Stein dia mihevitra ny teknolojia ho ampahany amin'ny fikarohana tsy an-kijanona fa, "Robot, AI ary teknolojia hafa dia hanohy handray anjara lehibe amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, saingy marina izany na dia talohan'ny areti-mandringana aza," mitanisa ny "check-in tsy misy fifandraisana, iPads ho an'ny preordering , ary fampiharana izay manampy amin'ny fisavana. ” Stein dia tsy miandrandra famolavolana hotely vaovao aorian'ny COVID-19; na izany aza, ny kojakoja azo ampiasaina dia azo ovaina miaraka amin'ny fanampian'ny "mpanadio tanana na angamba fitaovana mora fanadiovana sy hamafana aza"; na izany aza, tsy heveriny fa hanomboka hahita efitrano fivoriana misy toerana maharitra misy metatra metatra ny vahiny, na dia hitan'i Stein aza fa zava-dehibe ny famolavolana hotely amin'ny fampisehoana “traikefa amin'ny hotely mihaja.”
Mbola misy ve isika?
Post-COVID-19 dia tena tsy azo inoana mihitsy ny hiverenan'ilay maodelim-pahefatra ara-toekarena amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra satria tsy ilaina intsony amin'ny fanaovana safidy hotely, fitsangatsanganana ary fizahan-tany. Ny fisafidianana amin'ny fotoana, aiza ary ny antony hitsangatsanganana dia mety tsy mitombina tanteraka satria ny mpandeha dia hanana fampahalalana voafetra ary tsy mahafantatra ny fomba hafa azo soloina rehetra.
Ny fahaverezan'ny fahatokisana ireo mpitondra fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, ny loharanom-baovao marim-pototra sy marina dia handany fotoana sy hery bebe kokoa fa tsy hiteraka hetsika GO, dia hiafara amin'ny fanapahan-kevitra "miandry ary jereo". Ny fomba fanaovana fialantsasatra mety na vahinin'orinasa manao famandrihana, mifandraika amin'ireo mpiasan'ny dia sy mpiasan'ny hotely, manafatra zava-pisotro amin'ny fisotroana na trano fisakafoanana na milomano ao amin'ny pisinina - ny hetsika sy ny fifandraisana rehetra dia ho lasa zava-baovao. Ny fanovana dia tsy an-tsitrapo na an-tsitrapo, fa ny masoivohon'ny governemanta, ny manampahaizana manokana momba ny fitsaboana ary ny fitarihan'ny indostria no mibaiko azy.
Tany am-piandohan'ny krizy maro ny fikambanana no nijanona ny ezak'izy ireo amin'ny varotra ary nametra ny fifandraisan'izy ireo anatiny sy ivelany namorona ny filàna hafatra sy fomba vaovao natao hamahana ny zava-misy vaovao.
Miadana miadana ny fisokafan'ny fantsom-pifandraisana fa miaraka am-pitandremana lehibe. Ny dingana rehetra amin'ny lalana, manomboka amin'ny fizotran'ny fikarohana sy ny famandrihana amin'ny alalàn'ny fanandramana miditra dia mivoaka.
Araka ny hitan'i Marshall McLuhan, "Ny mpampita hafatra no hafatra." Izay voalaza, ny fomba fampitana azy, ary ireo fantsona voafantina - mitaky fanombanana avokoa izy rehetra ary ho kiana raha toa ny tanjona dia ny hametraka indray ny fifandraisana amin'ireo tsena kendrena. Ny trano fandraisam-bahiny sasany misy vahiny tsy mivadika dia hahita fandefasan-kafatra mifantoka amin'ny fahasalamana sy fiarovana azo antoka miaraka amin'ireo mpandeha ireo. Ho an'ny trano fandraisam-bahiny hafa, tsy maintsy mamorona ny tenany izy ireo satria niova ny tsena noho ny fidiram-bola, ny asa, ny haben'ny fianakaviana ary ny toe-piainana. Ny fianakaviana izay nijery trano / toeran-kaleha mba handany fotoana bebe kokoa miaraka dia mety, raha ny marina, dia maniry fety iray izay eo an-tampon'ny lisitry ny laharam-pahamehany ny halavirana. Izay hipoitra dia New Traveller ary ny demografika sy ny psychographics an'ity vahiny ity dia mbola faritana.
Ny tsena / toerana eo an-toerana, nasionaly ary iraisam-pirenena dia tsy manam-paharoa, mifototra amin'ny lalàna, lalàna ary fitsipika nofaritan'ny governemanta miaraka amin'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana. Ireo mpitantana hotely dia tsy maintsy mamorona paikadiny vaovao mifototra amin'ireo fepetra takiana ireo. Fivoriana sy programa mandrisika, raha vantany vao mety hiverina ny toerana mamy ho an'ny fidiram-bolan'ny trano fandraisam-bahiny - fa miadana kosa. Ny ekipa mpivarotra dia tsy maintsy mandinika tsara ny tsenan'izy ireo ary mandinika ny fomba hivezivezena amin'ireo mpanjifa vaovao sy / na vokatra sy serivisy vaovao hahatratrarana ny filana sy filàna miova.
Manamboara modely tsara kokoa
Mety ho fotoana mety izao handoroana ny tabilao fandaminana taloha ary hieritreretana indray ny fizotry ny fitantanana manontolo amin'ny eritreritra ny hanamorana ny mpiasa manoloana ny fandroahana mpiasa, ny fisotroan-dronono, ny mombamomba ny mpanjifa vaovao ary ny teknolojia vaovao izay hisy fiatraikany amin'ny fanovana hotely maro, manomboka amin'ny fampahalalana momba ny fampiroboroboana ny hotely , amin'ny famandrihana, fiantsenana, fisakafoanana, fialamboly, fifandraisana arak'asa sy ara-tsosialy.
Miaina amin'ny fotoanan'ny ahiahy sy tsy azo antoka isika izao, nefa maniry ny hitady fomba sy fomba hamerenana ny fahatokisan-tena amin'ny fitsangatsanganana sy amin'ny dia ataon'ny orinasa. Ny indostrian'ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany dia mivoatra, miova ho maodely vaovao. Ny indostria dia nahavita namboarina tamin'ny alàlan'ny taonarivo, ary raha nitanisa an'i Fred Rogers (Andriamatoa Rogers), "Matetika rehefa mieritreritra ianao fa any am-paran'ny zavatra iray, dia eo am-piandohan'ny zavatra hafa ianao."